I-FAQ - Guangzhou Longcheng Electronic Co., Ltd.
Iyini I-Virtual Reality?
I-Virtual reality (VR) iwukuzizwisa okusebenzisanayo okukhiqizwa ngekhompuyutha okwenzeka endaweni elingisayo.Ngokungafani ne-interface yomsebenzisi evamile, i-VR ibeka umsebenzisi ngaphakathi kokuhlangenwe nakho.Ngokulingisa izinzwa eziningi ngangokunokwenzeka, njengokubona, ukuzwa, ukuthinta, ngisho nokuhogela.Le ndawo egxilile ingase ifane nomhlaba wangempela noma ingaba yinhle, idale okuhlangenwe nakho okungenakwenzeka esimweni esingokoqobo esivamile.
Lithini ibanga lobude bemidlalo yakho?
Ubude bemidlalo busuka kumizuzu emi-3 kuye kweyi-10 ngokuya ngamadigri athokozisayo neziqephu zamafilimu.
Ingabe uyayibuyekeza le midlalo?
Yebo, sinikeza izinhlobo ezimbili zezibuyekezo zegeyimu.Enye imidlalo ethuthukiswe ithimba lethu, futhi sihlinzeka ngezibuyekezo zamahhala zamakhasimende ethu.Enye imidlalo ye-premium eyakhiwe nozakwethu.Sizoncoma imidlalo enjalo kumakhasimende ethu azoyithenga uma enentshisekelo.
Ingakanani i-voltage edingekayo?
Singahlinzeka nge-110V, 220V, kanye ne-240V futhi.Sicela usazise uma ikhasimende linesidingo esisodwa noma ngaphezulu.
Indlela yokufaka imishini?
Akudingekile ukufaka imikhiqizo yethu eminingi, futhi embalwa yayo kuphela edinga ukufakwa mathupha.Ukufaka njengokusho kwethu imanuwali yokufaka namavidiyo.
Ingakanani ubuncane be-oda lakho?Sithini isikhathi sokuhola?
Inani lethu elincane le-oda liwucezu olulodwa lwemishini, futhi isikhathi sokuhola izinsuku zokusebenza eziyi-5.
Indlela yokunakekela imishini?Ingakanani imvamisa yokulungisa?
Kudingeka ukuthi uhlole ukuthi izikulufu zezingxenye zokunyakaza zikhululekile kanye ngeviki okungenani futhi uhlole ukugcotshwa kwezingxenye ezinjalo kanye ngekota okungenani.
Yiziphi izidingo zesayithi?
Inhlabathi izoba isicaba futhi ihlanzeke ingabi namigodi, imigodi, ibala lamanzi, nokungcoliswa kukawoyela ukuze kuvinjelwe ukuwa.Ukukhanya kwelanga okuqondile (noma okunye ukukhanya okunamandla) kumalensi ezingilazi kufanele kugwenywe ukuze kuvinjelwe umonakalo.
Ingabe inkampani yakho inazo izitifiketi ezidingekayo kithi?
Sinezitifiketi (ezifana ne-CE, RoHS, SGS) ezidingekayo emazweni amaningi emhlabeni futhi ungasithinta ukuze uthole isiqinisekiso esiqondile ngezwe lakini.
Iyini iwaranti yakho yesisetshenziswa sakho se-VR?
Iwaranti yonyaka ongu-1 yehadiwe!Usekelo lobuchwepheshe empilweni yakho yonke!
Kuthiwani ngeshejuli yokuthunyelwa kanye nezindleko zempahla?
Ikhasimende ngalinye kudingeka linikeze ikheli lalo lokulethwa ukuze sikwazi ukubuza mayelana neshejuli yokuthunyelwa efanele ngokusekelwe ekhelini elingenhla.Mayelana nezindleko zempahla, noma iliphi ikhasimende lingavumela umthumeli walo ose-China eze efektri yethu ukuzolanda izimpahla.Uma kwenzeka ikhasimende lisicela ukuthi sincome umdluliseli, lingasho izidingo ezifanele kubasebenzi bethu besevisi yamakhasimende.Ikhasimende lizokhokhela ama-akhawunti nomdluliseli ngamashaji ezimpahla zangempela, futhi sinikeza ukunethezeka nosizo kuwo wonke amakhasimende mahhala.